ကျောက်စိမ်းမြေ က လောင်ပန်လောင်းတွေရဲ့ ကွဲပျက် သွား တဲ့ အိပ်မက်များ – Zartiman
ကျောက်တစ်ပွင့် ရရုံနဲ့ ချက်ချင်းသူဌေး ဖြစ်နိုင်တာမို့ သူတို့တွေအတွက် ဒီငွေတွေ ကို ပျော်စရာ သုံးစရာ မရှားလှပါဘူး။ လွယ်လင့်တကူ ရတဲ့ မူးယစ်ဆေးနဲ့ အတူ ဟိုတယ်အခန်းတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေကို အပြတ်ငှားပြီး အပျော်အပါးရှာကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မှိန်ပြပြ လမ်းမီးရောင်အောက် ဒယီးဒယိုင်နဲ့ သွားနေကြတဲ့ ဆေးသမားတချို့ကိုလည်း မြင်ရပါတယ်။ကျွန်မတို့ကို ကားမောင်းပို့ခဲ့တဲ့ ကားဆရာ ကတော့ ညစာထွက်စားချိန် ကျွန်မတို့နဲ့ သူက လိုက်မလာခဲ့ပါဘူး။”ဖားကန့်ကို ရောက်လို့ မှ ဆေးမသုံးခဲ့ ဘူးဆို ဘယ်တန်မလဲဗျာ” လို့ ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ တချက်ရယ်လိုက်ပြီး ဟိုတယ်ဘေးက အမှောင်လမ်းကြားလေးထဲ ဝင်ရောက် ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။
မြစ်ကြီးနားကနေ စ ခရီးထွက် လာကတည်းက အကွေ့အဝိုက် အတက်အဆင်းများလှတဲ့ လမ်းခရီးကြမ်းကိုနှင်လာရတဲ့ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ ကတ္တရာခပ်ပါးပါးခင်းထားတဲ့ ဖားကန့်မြို့အဝင်လမ်းကြောင့် သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်သွားရပေမယ့် ဒါက သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။ ကျောက်ခဲ စလုံးစခုလမ်းတွေ မြေသားချိုင့်ခွက်တွေနဲ့ မညီမညာလမ်းတွေဆီ ပြန်ရောက်လာပါတယ်။မညီမညာရှိလှတဲ့ လမ်းတွေဟာ လူ တရပ်ကျော်မြင့်တဲ့ အုတ်တံတိုင်းကြီးတွေ ကာထားတဲ့ ခြံဝင်းကျယ်ကြီးတွေနဲ့ မလိုက်ဖက်လှပါဘူး။နေအိမ်တွေကိုတော့ လမ်းထက်မြင့် တဲ့နေရာမှာ ဆောက်ထားကြပါတယ်။မိုးတွင်းဆို မြို့ထဲလမ်းတွေပေါ် ရေဝင်လို့ ဒီလမ်းတွေကို ကောင်းအောင် မပြုပြင်နိုင်တာလို့ ဖားကန့် ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဖားကန့်မြို့အဝင် ရွာထဲက လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ ဆေးသုံးပြီး မှိန်းနေကြသူတချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။ဖားကန့်မြို့အဝင် ရွာထဲက လမ်း ဘေးတစ်နေရာမှာ ဆေးသုံးပြီး မှိန်းနေကြသူတချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။မြို့အဝင် လမ်းထောင့်တွေမှာကိုပဲ အင်္ကျီခပ်နွမ်းနွမ်း ဝတ်ထားတဲ့ လဲလျောင်းနေသူ ၁ ဦးစ၊ ၂ ဦးစကို စမြင်ရပါတယ်။ကားဆရာက “ဒါ ဆေးသမားတွေလေ” လို့ ပြောပြပါတယ်။”မထူးဆန်းဘူးဗျ၊ ဒါမျိုး မမြင်ရရင်သာ ဖားကန့်မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရမှာ” လို့ သူက ရယ်ပြီး ပြောပါတယ်။ တကယ်တော့ ဖားကန့်ဟာ ကျောက်စိမ်းမြို့ တော်ဆိုပေမယ့် နယ်မြို့လေး တစ်မြို့လောက်တောင် ပကာသန ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှိလှပါဘူး။
ဖားကန့်မြို့ကနေ နာရီဝက်လောက် မောင်းရတဲ့ ဆိပ်မူ ကျေးရွာအုပ်စုထဲက ဝေခါ မှော်ဆီ အရောက်မှာတော့ လူတွေ စုရုံး စုရုံးဖြစ်နေကြ တာကို တွေ့ရပါတယ်။”ကုမ္ပဏီတွေက စွန့်ပစ်မြေစာတွေကို နေအိမ်တွေနား လာပုံတယ်၊ ဟိုရက်က မြေစာပိလို့ နေအိမ်တချို့ ပါသွား တယ်၊ မြေစာတွေ ဆက်မပုံဖို့ တောင်းဆိုနေကြတာ” လို့ ရွာခံ ကိုချစ်တုံးက ပြောပါတယ်။ဒီရွာမှာ မြေစာတောင်တန်းတွေ၊ ကြီးမားမတ် စောက်တဲ့ ကျောက်ကမ်းပါးယံတွေက လူနေအိမ်ခြေတွေနား ရှိနေပြီး မြေစာပုံအောက် အိမ်အလုံးလိုက်ရောက်ခဲ့တာ၊ လူသေတာတွေက မကြာခဏဖြစ်နေပါတယ်။ဝေခါမှော်ထဲရောက်တော့ နေ့လယ် ၂ နာရီလောက် ရှိနေပါပြီ။
ကျဲကျဲတောက် နေရောင်အောက်မှာ အုပ်စုလိုက်လူတွေ အပူဒဏ်ကို မမှုဘဲ ကျောက်တုံးတွေကိုထုပြီး အလုပ်များနေကြပါတယ်။ ရေမဆေး သမားတွေကတော့ တကိုယ် လုံး အပြည့် အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီအရှည်နဲ့ ခမောက်လို အကာကြီးကြီးပါတဲ့ ဦးထုပ်တွေ ဆောင်းထား ပြီး လက်မှာလည်း ထိပ်ချွန်ချွန် တူ ၁ ချောင်းစီ ကိုင်ထားကြပါတယ်။သူတို့တွေက ဒါကို စိန်တူ လို့ ခေါ်ကြ ပါတယ်။ မှော်ထဲကျောက်ရှာ ကြသူတွေအဖို့ စိန်တူဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်စိမ်းလို့ ထင်ရတဲ့ ကျောက်တုံးတွေ့ပြီဆိုရင် စိန်တူ နဲ့ ခေါက်ကြည့်၊ အသံ နားထောင်ကြည့်၊ ကျောက်တုံး အပေါ်ယံ ဘယ်လောက်ကွာကျလဲ ဆိုတာကြည့်ပြီး ။
ဒါက ရောင်းတန်းဝင်ကျောက် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။စိန်တူဟာ ရေမဆေးသမားတွေအဖို့ မရှိလို့မဖြစ်တဲ့ လက်နက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ရပြီဆိုရင် ရေတောင်မဆေးဘဲ တခါတည်းတန်းပြီး ကျောက်ကုန်သည်တွေဆီ သွားရောင်းကြတာမို့ ဒီဒေသမှာ ကျောက်ရှာသူတွေကို “ရေမဆေးသမား” ရယ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။မှော်ထဲမှာလည်း လူအရပ် သုံး လေး ပြန်လောက် မြင့်တဲ့ ကျောက်တူး ကားကြီးတွေ၊ မြေစာပုံသယ်တဲ့ ကားကြီးတွေက လူးလာခေါက်တုံ့ ဥဒဟို သွားနေကြပါတယ်။ပေထောင်ချီ နက်အောင် တူးဖော်ထားတဲ့ ကျောက်မှော်တွေထဲ ဆယ်ဘီးကားကြီးတွေ အဆက်မပြတ် သွားလာနေကြတာပါ။ ဒီကားတွေကို ရှောင်ရတာလည်း မလွယ်လှ ပါဘူး။
ဝေခါမှော်ထဲ ရေမဆေး ကျောက်ရှာနေတဲ့ မနွယ်နွယ်ဝင်းက “ကျွန်မဆို တစ်ယောက်တည်း မသွားရဲဘူး၊ ဒီကားတွေက ဘယ်သူ့ကိုမှ မရှောင်ဘူး၊ ကားတိုက်မိလို့ သေတဲ့အဖြစ်တွေက ခဏခဏပဲ၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတိထား” လို့ ကျမတို့ကို ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်း ပြောပါ တယ်။ဧရာဝတီတိုင်း ကျောင်းကုန်းမြို့သူ မနွယ်ဟာ ဖားကန့်ရောက်နေတာ အနှစ် ၂၀ ကျော် ရှိပါပြီ။ဒီမှာပဲ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့တွေ့၊ အိမ် ထောင်ကျ၊ ခုတော့ သမီး ၃ ယောက် အမေ ဖြစ်နေပြီလို့ သူ့အကြောင်းတွေကို ပြောပြပါတယ်။မနွယ်ဟာ ၁၀ တန်း တက်နေတဲ့ သမီးဖြစ်သူ နဲ့ မှော်ထဲ ကျောက်လာရှာလေ့ရှိပါတယ် စကားပြောနေတုန်းပဲ ရေမဆေးသမားတစုဟာ ကားတွေနောက်။
အလုအယက် အပြေးအလွှား လိုက်သွားကြပါတယ်။ကျောက်မျက်လုပ်ကွက်တွေမှာ ကုမ္ပဏီတွေက စိတ်တိုင်းကျရှာပြီး စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ မြေစာပုံတွေ တင်လာတဲ့ကားတွေ နောက်ပါ။ဖားကန့်က ဘယ်လောက်တောင်မှ ကျောက်စိမ်းပေါသလဲဆိုရင် တူးတဲ့နေရာ တိုင်းက ထွက် နေတာ၊ ကုမ္ပဏီတွေက စွန့်ပစ်အမှိုက်ဆိုပေမဲ့ ဒီကနေ ကျောက်ကောင်း တစ်လုံးရပြီး လောပန်ဖြစ်သွားသူတွေ မနည်းဘူး” လို့ မနွယ်က ပြောပါတယ်။နေ့နေ့ညည ကျောက်ရှာပြီး ရောင်းတန်းဝင် ကျောက်လေးတစ်တုံး ရလိုရငြားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်က သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်တစ် ခုပါ။”အဲ့လိုမျိုး ကျောက်ရရင်တော့ဆိုပြီး အရမ်းကို စိတ်ကူးယဉ်မိတာပေါ့၊
ကျောက်ကလေး ရရင်တော့….” လို့ မနွယ်က သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးကို ပြောရင်း မျက်နှာကလည်း ပြုံးယောင်သန်းလာပါတယ်။သူဌေးဖြစ်ရေး အိပ်မက်တွေနဲ့ ဖားကန့်ကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လာကြတဲ့ ရေမဆေးကျောက်ရှာသူ ၃ သိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့ ပြည်နယ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျောက်မှော်တွေနား၊ မြေစာပုံတွေနားမှာပဲ ခနော်နီ ခနော်နဲ့ ထိုးထားတဲ့ တဲတွေမှာ သူတို့တွေ မိသားစုလိုက် နေထိုင်ကြပါတယ်။ကျိုးတို့ ကျဲတဲ ဝါးခြမ်းပြား အကာအရံပေါ် တာလပတ် အုပ်ထားတဲ့ တဲတွေကို ဟိုတစ်စု ဒီတစု မြင်ရပါတယ်။မိုးကာလ မိုးတွေ လေတွေကျပြီဆိုရင် မိသားစု တွေ နေရေးထိုင်ရေး အခက်ကြုံကြရပါတယ်။
“နေစရာမှ မရှိတာ၊ ညတုန်းက ဆိုလို့ရှိရင် အိပ်လို့တောင် မပျော်ဘူး၊ သားအမိတွေ အကုန် လုံး ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတာ၊ မိုးလေး လေလေး ငြိမ်မှ အိပ်ပျော်တာ.. ယောက်ျားလည်း တခါတခါကျ မိုးလင်းပေါက် ကျောက်ရှာတယ်ဆိုတော့ မရှိဘူး” လို့ မနွယ်က သူ့ဘဝအကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်။မိုးတွင်းဆို မြေစာပုံတွေ ခဏခဏ ပြိုလို့ မြေပိသေဆုံးမှုတွေ မကြာခဏ ဖြစ်နေတာပါ။ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာ စွန့်ပစ်မြေစာ ပုံပြိုလို့ သေဆုံးရတာတွေကလည်း မကြာခဏ ကြုံနေရတာပါပိုက်ဆံနည်းနည်း တတ်နိုင်သူတွေကတော့ မှော်တွေနားက တချို့အိမ်တွေ မှာ ငှားနေကြရပါတယ်။အိမ်တချို့မှာတော့ အောက်ခံမြေမကောင်းလို့ ကြမ်းခင်း သမံတလင်း နေရာအတော်များများမှာ။
အက်ကွဲကြောင်းတွေ မြင်တွေ့ရပြီး ။အိမ်လုံးလိုက် အနေ့မြင် ညပျောက် အဖြစ်တွေလည်း မကြာခဏ ကြုံရပါတယ်လို့ ဒီကို ရောက်နေသူ အမူအရာတွေက မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေကြပုံပါ။အန္တရာယ်များလှတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ဖြေသိမ့်ဖို့ တခြားနည်းလမ်းတွေ သူတို့တွေ ရှာကြ ပါတော့တယ်။ဖားကန့်မှာ အလွယ်ကူဆုံးရနိုင်တာ မူးယစ်ဆေးပါ။”ဒီအရပ်ဒေသမှာ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းကလည်း ဒီလိုပဲဆိုတော့ ပျော် နေသလိုပဲဗျာ…. ခုတော့ ကြိုက်သွားပြီဆိုတော့ တစ်ရက်စာ မရှုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်က ကျောက်မရှာနိုင်တော့ဘူး” လို့ ဟိုပင်ကနေ ဖား ကန့်ကို ကျောက်ရှာဖို့ ရောက်လာခဲ့တဲ့ ကိုစိန်လင်းက ပြောပါတယ်။ အသက်နဲ့ လောင်းကြေးထပ်ပြီး ကျောက်ရှာနေကြသူတွေ့အဖို့။
မူးယစ် ဆေးဝါးက သူတို့စိတ်ဖြေရာလို ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဒီမှာ ဝါကျင့်ကျင့်အရောင်နဲ့ အဖြူရောင်အမှုန့်တွေ ရောနေတဲ့ ဘိန်းဖြူမှုန့်ကို အနည်းဆုံး ငွေကျပ် ၂၀၀ လောက်နဲ့ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။၁ ခါရှုကို ၁ ပေါက်ရှုလို့ ခေါ်ပြီး အနည်းဆုံး ၂၀၀ ဖိုးနဲ့ဝယ်နိုင်ပြီး တခါထိုးပမာဏ ဘိန်းဖြူဆိုရင် အနည်းဆုံး ကျပ် ၅၀၀ ဖိုးအထိ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ဘိန်းဖြူကို အကြောထဲ ထိုးသွင်းသူတွေကတော့ သုံးစွဲမယ့် ဘိန်းဖြူပမာဏ ကို ဆေးထိုးအပ်ထဲ ထည့်ပြီး ရေနဲ့ရော၊ အကြောထဲကို ထိုးသွင်းကြပါတယ်။မှော်နဲ့ မနီးမဝေး ဆိပ်မူရွာထဲမှာတော့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ သုံးပြီး သား ဆေးထိုးအပ်တွေကို လမ်းဘေးတလျှောက် မြင်ရပါတယ်။ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းနဲ့ ကျောချင်းကပ်မှာကိုပဲ ။
ဖိုးသမားတွေရဲ့ တဲလေးတွေ ဟိုတစု ဒီတစု ရှိနေပါတယ်။သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ခပ်ကျယ်ကျယ် ဆိုင်ကယ် ဟွန်းသံတွေပေးပြီး ဆေးသမား တွေ အုပ်စုလိုက် ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီနေရာဟာ ညနေတိုင်း သူတို့တွေ စုဝေးရာအရပ်လို့ ရွာခံတွေက ပြောပါတယ်။ခဏကြာတော့ ဘိန်းရှုသူရှု၊ အကြောထဲ ဆေးထိုးသူထိုးနဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံ ယာယီရောက်ဖို့အရေးထက် ဘာကိုမှ သူတို့တွေ ဂရုမစိုက်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။မှိန်းပြီး ဇိမ်ခံနေကြသူတွေရှိသလို လက်တွေ ပေါင်တွေမှာ ဆေးထိုးအပ်တန်းလန်း နဲ့ ဥဒဟို သွားလာနေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။အသိစိတ်မဲ့ သွား လာနေကြသူတွေကို နေဝင်ရီတရော မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက ခြောက်ခြားစရာကောင်းလှပါတယ်။”
ကျောက်လာရှာတယ်၊ ပိုက်ဆံလာရှာတယ် ဆိုတာ မိသားစုနဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး နေချင်လို့ပေါ့ဗျာ …ဒါပေမဲ့ မပြေလည်ခဲ့ဘူး..” လို့ ကိုစိန် လင်းကလည်း သူ့ဘဝကြီးကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် အားလျော့သံနဲ့ ပြောပါတယ်။ကျောက်မျက်မှော်တွေနဲ့ အနီးတဝိုက်ရွာတွေထဲမှာကိုပဲ လွှတ်ပစ်ထားတဲ့ ဆေးထိုးအပ်တွေကို လမ်းဘေးတလျှောက် ပြန့်ကျဲနေပါတယ်”ခုက ဖိုးသမားအဆင့်ရောက်နေပြီဆိုတော့ ယင်းလည်း တော်တော်ကြီးလာပြီ၊ ဖြတ်ဖို့လည်း တော်တော်ခက်သွားပြီ၊ တစ်ရက်ကို မရှိဘူးဆို အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ် ၃ ကြိမ် တခါတလေလည်း ၅ ကြိမ် ၆ ကြိမ် ပိုက်ဆံရှိရင် ရှိသလို သုံးတယ်” လို့ ကျောက်ရှာဖို့ မိုးညှင်းကနေ ဖားကန့်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ကိုဝင်းအောင်က ပြောပါတယ်။
ခြေတွေ လက်တွေမှာ ဆေးထိုးအပ်ရာ ဗရပွနဲ့ သူ့ကြည့်ရတာ အတော်လေး အားနည်းနေပုံလည်း ရပါတယ်။အဝေးတနေရာကို လှမ်းမျှော် ကြည့်ရင်း “ကိုယ့်ဘဝကြီးကို ဘယ်လိုမှကို မပြောတတ်တာ…””ကိုယ့်ကိုယ်သေသွားတာပဲ ကောင်းတယ်..ကိုယ့်မိဘတွေ ကိုယ်ပတ်ဝန်း ကျင်နဲ့ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းကို မပြရဲတာ… ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ ထင်ကို မထင်ထားဘူး၊ ကိုယ်သုံးတုန်းကတော့ အပျော်သက်သက်ပဲ၊ ဒီ လောက်ကြီး စုတ်ပြတ်သက်သွားမယ်လို့ မထင်ထားဘူး” လို့ အဝေးတနေရာကို ခပ်တွေတွေကြီး လှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်း ကိုဝင်းအောင်က ပြောပါတယ်။ မှော်ထဲကနေ ဖားကန့်မြို့ကို ပြန်ရောက်တော့ မိုးစုပ်စုပ်ချုပ် နေပါပြီ။
နေ့ခင်းဘက်မှာ ဖုန်ထူပြီး ခြောက်သွေ့လှပေမဲ့ ညဘက်မှာတော့ ပြန်လည် သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပါတယ်။မီးရောင် ခပ်မှိန်မှိန်ထွန်းထားတဲ့ တည်းခိုခန်းတွေ၊ ပျော်ပွဲစားရုံတွေထဲ လောင်းကစားဝိုင်းတွေ၊ လိင်အလုပ်သမတွေနဲ့ ညဟာ အလုပ် များနေပါတယ်။မှော်တွေထဲက လော ပန်ကြီးတွေ လာရောက်အပန်းဖြေကြတာဖြစ်လို့ တည်းခိုခန်းတွေမှာ အခန်းတစ်ခန်းရဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။”ဖားကန့်က ပူတယ်လေ၊ ဒီတော့ ညဆို လောပန်တွေက ဟော်တယ်မှာ လာအိပ်ကြတာပေါ့” လို့ ဟိုတည်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ကြောကျစိမျးမွေ က လောငျပနျလောငျးတှရေဲ့ ကှဲပကျြ သှား တဲ့ အိပျမကျမြား
ကြောကျတဈပှငျ့ ရရုံနဲ့ ခကျြခငျြးသူဌေး ဖွဈနိုငျတာမို့ သူတို့တှအေတှကျ ဒီငှတှေေ ကို ပြျောစရာ သုံးစရာ မရှားလှပါဘူး။ လှယျလငျ့တကူ ရတဲ့ မူးယဈဆေးနဲ့ အတူ ဟိုတယျအခနျးတှေ၊ စားသောကျဆိုငျတှကေို အပွတျငှားပွီး အပြျောအပါးရှာကွတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ မှိနျပွပွ လမျးမီးရောငျအောကျ ဒယီးဒယိုငျနဲ့ သှားနကွေတဲ့ ဆေးသမားတခြို့ကိုလညျး မွငျရပါတယျ။ကြှနျမတို့ကို ကားမောငျးပို့ခဲ့တဲ့ ကားဆရာ ကတော့ ညစာထှကျစားခြိနျ ကြှနျမတို့နဲ့ သူက လိုကျမလာခဲ့ပါဘူး။”ဖားကနျ့ကို ရောကျလို့ မှ ဆေးမသုံးခဲ့ ဘူးဆို ဘယျတနျမလဲဗြာ” လို့ ပွောပါတယျ။ပွီးတော့ တခကျြရယျလိုကျပွီး ဟိုတယျဘေးက အမှောငျလမျးကွားလေးထဲ ဝငျရောကျ ပြောကျကှယျသှားပါတော့တယျ။
မွဈကွီးနားကနေ စ ခရီးထှကျ လာကတညျးက အကှအေ့ဝိုကျ အတကျအဆငျးမြားလှတဲ့ လမျးခရီးကွမျးကိုနှငျလာရတဲ့ ကြှနျမတို့အဖှဲ့ ကတ်တရာခပျပါးပါးခငျးထားတဲ့ ဖားကနျ့မွို့အဝငျလမျးကွောငျ့ သကျသောငျ့သကျသာ ဖွဈသှားရပမေယျ့ ဒါက သိပျမကွာလိုကျပါဘူး။ ကြောကျခဲ စလုံးစခုလမျးတှေ မွသေားခြိုငျ့ခှကျတှနေဲ့ မညီမညာလမျးတှဆေီ ပွနျရောကျလာပါတယျ။မညီမညာရှိလှတဲ့ လမျးတှဟော လူ တရပျကြျောမွငျ့တဲ့ အုတျတံတိုငျးကွီးတှေ ကာထားတဲ့ ခွံဝငျးကယျြကွီးတှနေဲ့ မလိုကျဖကျလှပါဘူး။နအေိမျတှကေိုတော့ လမျးထကျမွငျ့ တဲ့နရောမှာ ဆောကျထားကွပါတယျ။မိုးတှငျးဆို မွို့ထဲလမျးတှပေျေါ ရဝေငျလို့ ဒီလမျးတှကေို ကောငျးအောငျ မပွုပွငျနိုငျတာလို့ ဖားကနျ့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။
ဖားကနျ့မွို့အဝငျ ရှာထဲက လမျးဘေးတဈနရောမှာ ဆေးသုံးပွီး မှိနျးနကွေသူတခြို့ကို တှရေ့ပါတယျ။ဖားကနျ့မွို့အဝငျ ရှာထဲက လမျး ဘေးတဈနရောမှာ ဆေးသုံးပွီး မှိနျးနကွေသူတခြို့ကို တှရေ့ပါတယျ။မွို့အဝငျ လမျးထောငျ့တှမှောကိုပဲ အကငြ်္ီခပျနှမျးနှမျး ဝတျထားတဲ့ လဲလြောငျးနသေူ ၁ ဦးစ၊ ၂ ဦးစကို စမွငျရပါတယျ။ကားဆရာက “ဒါ ဆေးသမားတှလေေ” လို့ ပွောပွပါတယျ။”မထူးဆနျးဘူးဗြ၊ ဒါမြိုး မမွငျရရငျသာ ဖားကနျ့မှ ဟုတျရဲ့လားလို့ မေးခှနျးထုတျရမှာ” လို့ သူက ရယျပွီး ပွောပါတယျ။ တကယျတော့ ဖားကနျ့ဟာ ကြောကျစိမျးမွို့ တျောဆိုပမေယျ့ နယျမွို့လေး တဈမွို့လောကျတောငျ ပကာသန ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ မရှိလှပါဘူး။
ဖားကနျ့မွို့ကနေ နာရီဝကျလောကျ မောငျးရတဲ့ ဆိပျမူ ကြေးရှာအုပျစုထဲက ဝခေါ မှျောဆီ အရောကျမှာတော့ လူတှေ စုရုံး စုရုံးဖွဈနကွေ တာကို တှရေ့ပါတယျ။”ကုမ်ပဏီတှကေ စှနျ့ပဈမွစောတှကေို နအေိမျတှနေား လာပုံတယျ၊ ဟိုရကျက မွစောပိလို့ နအေိမျတခြို့ ပါသှား တယျ၊ မွစောတှေ ဆကျမပုံဖို့ တောငျးဆိုနကွေတာ” လို့ ရှာခံ ကိုခဈြတုံးက ပွောပါတယျ။ဒီရှာမှာ မွစောတောငျတနျးတှေ၊ ကွီးမားမတျ စောကျတဲ့ ကြောကျကမျးပါးယံတှကေ လူနအေိမျခွတှေနေား ရှိနပွေီး မွစောပုံအောကျ အိမျအလုံးလိုကျရောကျခဲ့တာ၊ လူသတောတှကေ မကွာခဏဖွဈနပေါတယျ။ဝခေါမှျောထဲရောကျတော့ နလေ့ယျ ၂ နာရီလောကျ ရှိနပေါပွီ။
ကြဲကြဲတောကျ နရေောငျအောကျမှာ အုပျစုလိုကျလူတှေ အပူဒဏျကို မမှုဘဲ ကြောကျတုံးတှကေိုထုပွီး အလုပျမြားနကွေပါတယျ။ ရမေဆေး သမားတှကေတော့ တကိုယျ လုံး အပွညျ့ အကငြ်္ီလကျရှညျ၊ ဘောငျးဘီအရှညျနဲ့ ခမောကျလို အကာကွီးကွီးပါတဲ့ ဦးထုပျတှေ ဆောငျးထား ပွီး လကျမှာလညျး ထိပျခြှနျခြှနျ တူ ၁ ခြောငျးစီ ကိုငျထားကွပါတယျ။သူတို့တှကေ ဒါကို စိနျတူ လို့ ချေါကွ ပါတယျ။ မှျောထဲကြောကျရှာ ကွသူတှအေဖို့ စိနျတူဟာ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ လကျနကျတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ကြောကျစိမျးလို့ ထငျရတဲ့ ကြောကျတုံးတှပွေီ့ဆိုရငျ စိနျတူ နဲ့ ခေါကျကွညျ့၊ အသံ နားထောငျကွညျ့၊ ကြောကျတုံး အပျေါယံ ဘယျလောကျကှာကလြဲ ဆိုတာကွညျ့ပွီး ။
ဒါက ရောငျးတနျးဝငျကြောကျ ဟုတျမဟုတျဆိုတာ ခနျ့မှနျးကွပါတယျ။စိနျတူဟာ ရမေဆေးသမားတှအေဖို့ မရှိလို့မဖွဈတဲ့ လကျနကျ လညျး ဖွဈပါတယျ။ကြောကျရပွီဆိုရငျ ရတေောငျမဆေးဘဲ တခါတညျးတနျးပွီး ကြောကျကုနျသညျတှဆေီ သှားရောငျးကွတာမို့ ဒီဒသေမှာ ကြောကျရှာသူတှကေို “ရမေဆေးသမား” ရယျလို့ ချေါကွပါတယျ။မှျောထဲမှာလညျး လူအရပျ သုံး လေး ပွနျလောကျ မွငျ့တဲ့ ကြောကျတူး ကားကွီးတှေ၊ မွစောပုံသယျတဲ့ ကားကွီးတှကေ လူးလာခေါကျတုံ့ ဥဒဟို သှားနကွေပါတယျ။ပထေောငျခြီ နကျအောငျ တူးဖျောထားတဲ့ ကြောကျမှျောတှထေဲ ဆယျဘီးကားကွီးတှေ အဆကျမပွတျ သှားလာနကွေတာပါ။ ဒီကားတှကေို ရှောငျရတာလညျး မလှယျလှ ပါဘူး။
ဝခေါမှျောထဲ ရမေဆေး ကြောကျရှာနတေဲ့ မနှယျနှယျဝငျးက “ကြှနျမဆို တဈယောကျတညျး မသှားရဲဘူး၊ ဒီကားတှကေ ဘယျသူ့ကိုမှ မရှောငျဘူး၊ ကားတိုကျမိလို့ သတေဲ့အဖွဈတှကေ ခဏခဏပဲ၊ ကိုယျ့ဟာကိုယျ သတိထား” လို့ ကမြတို့ကို ပွုံးပွနှုတျဆကျရငျး ပွောပါ တယျ။ဧရာဝတီတိုငျး ကြောငျးကုနျးမွို့သူ မနှယျဟာ ဖားကနျ့ရောကျနတော အနှဈ ၂၀ ကြျော ရှိပါပွီ။ဒီမှာပဲ ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့တှေ့၊ အိမျ ထောငျကြ၊ ခုတော့ သမီး ၃ ယောကျ အမေ ဖွဈနပွေီလို့ သူ့အကွောငျးတှကေို ပွောပွပါတယျ။မနှယျဟာ ၁၀ တနျး တကျနတေဲ့ သမီးဖွဈသူ နဲ့ မှျောထဲ ကြောကျလာရှာလရှေိ့ပါတယျ စကားပွောနတေုနျးပဲ ရမေဆေးသမားတစုဟာ ကားတှနေောကျ။
အလုအယကျ အပွေးအလှား လိုကျသှားကွပါတယျ။ကြောကျမကျြလုပျကှကျတှမှော ကုမ်ပဏီတှကေ စိတျတိုငျးကရြှာပွီး စှနျ့ပဈလိုကျတဲ့ မွစောပုံတှေ တငျလာတဲ့ကားတှေ နောကျပါ။ဖားကနျ့က ဘယျလောကျတောငျမှ ကြောကျစိမျးပေါသလဲဆိုရငျ တူးတဲ့နရော တိုငျးက ထှကျ နတော၊ ကုမ်ပဏီတှကေ စှနျ့ပဈအမှိုကျဆိုပမေဲ့ ဒီကနေ ကြောကျကောငျး တဈလုံးရပွီး လောပနျဖွဈသှားသူတှေ မနညျးဘူး” လို့ မနှယျက ပွောပါတယျ။နနေ့ညေ့ည ကြောကျရှာပွီး ရောငျးတနျးဝငျ ကြောကျလေးတဈတုံး ရလိုရငွားဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြက သူတို့ရဲ့ အိပျမကျတဈ ခုပါ။”အဲ့လိုမြိုး ကြောကျရရငျတော့ဆိုပွီး အရမျးကို စိတျကူးယဉျမိတာပေါ့၊
ကြောကျကလေး ရရငျတော့….” လို့ မနှယျက သူ့ရဲ့ စိတျကူးကို ပွောရငျး မကျြနှာကလညျး ပွုံးယောငျသနျးလာပါတယျ။သူဌေးဖွဈရေး အိပျမကျတှနေဲ့ ဖားကနျ့ကို အနယျနယျအရပျရပျက လာကွတဲ့ ရမေဆေးကြောကျရှာသူ ၃ သိနျးကြျောရှိနပွေီလို့ ပွညျနယျအစိုးရက ထုတျပွနျထားပါတယျ။ကြောကျမှျောတှနေား၊ မွစောပုံတှနေားမှာပဲ ခနျောနီ ခနျောနဲ့ ထိုးထားတဲ့ တဲတှမှော သူတို့တှေ မိသားစုလိုကျ နထေိုငျကွပါတယျ။ကြိုးတို့ ကြဲတဲ ဝါးခွမျးပွား အကာအရံပျေါ တာလပတျ အုပျထားတဲ့ တဲတှကေို ဟိုတဈစု ဒီတစု မွငျရပါတယျ။မိုးကာလ မိုးတှေ လတှေကေပြွီဆိုရငျ မိသားစု တှေ နရေေးထိုငျရေး အခကျကွုံကွရပါတယျ။
“နစေရာမှ မရှိတာ၊ ညတုနျးက ဆိုလို့ရှိရငျ အိပျလို့တောငျ မပြျောဘူး၊ သားအမိတှေ အကုနျ လုံး ငုတျတုတျထိုငျနရေတာ၊ မိုးလေး လလေေး ငွိမျမှ အိပျပြျောတာ.. ယောကျြားလညျး တခါတခါကြ မိုးလငျးပေါကျ ကြောကျရှာတယျဆိုတော့ မရှိဘူး” လို့ မနှယျက သူ့ဘဝအကွောငျးကို ပွောပွပါတယျ။မိုးတှငျးဆို မွစောပုံတှေ ခဏခဏ ပွိုလို့ မွပေိသဆေုံးမှုတှေ မကွာခဏ ဖွဈနတောပါ။ဒီလိုနရောမြိုးတှမှော စှနျ့ပဈမွစော ပုံပွိုလို့ သဆေုံးရတာတှကေလညျး မကွာခဏ ကွုံနရေတာပါပိုကျဆံနညျးနညျး တတျနိုငျသူတှကေတော့ မှျောတှနေားက တခြို့အိမျတှေ မှာ ငှားနကွေရပါတယျ။အိမျတခြို့မှာတော့ အောကျခံမွမေကောငျးလို့ ကွမျးခငျး သမံတလငျး နရောအတျောမြားမြားမှာ။
အကျကှဲကွောငျးတှေ မွငျတှရေ့ပွီး ။အိမျလုံးလိုကျ အနမွေ့ငျ ညပြောကျ အဖွဈတှလေညျး မကွာခဏ ကွုံရပါတယျလို့ ဒီကို ရောကျနသေူ အမူအရာတှကေ မြှျောလငျ့ခကျြ ကငျးမဲ့နကွေပုံပါ။အန်တရာယျမြားလှတဲ့ လုပျငနျးခှငျကို ဖွသေိမျ့ဖို့ တခွားနညျးလမျးတှေ သူတို့တှေ ရှာကွ ပါတော့တယျ။ဖားကနျ့မှာ အလှယျကူဆုံးရနိုငျတာ မူးယဈဆေးပါ။”ဒီအရပျဒသေမှာ ကိုယျ့အပေါငျးအသငျးကလညျး ဒီလိုပဲဆိုတော့ ပြျော နသေလိုပဲဗြာ…. ခုတော့ ကွိုကျသှားပွီဆိုတော့ တဈရကျစာ မရှုလို့ရှိရငျ ကြှနျတျောက ကြောကျမရှာနိုငျတော့ဘူး” လို့ ဟိုပငျကနေ ဖား ကနျ့ကို ကြောကျရှာဖို့ ရောကျလာခဲ့တဲ့ ကိုစိနျလငျးက ပွောပါတယျ။ အသကျနဲ့ လောငျးကွေးထပျပွီး ကြောကျရှာနကွေသူတှအေ့ဖို့။
မူးယဈ ဆေးဝါးက သူတို့စိတျဖွရောလို ဖွဈလာပါတော့တယျ။ဒီမှာ ဝါကငျြ့ကငျြ့အရောငျနဲ့ အဖွူရောငျအမှုနျ့တှေ ရောနတေဲ့ ဘိနျးဖွူမှုနျ့ကို အနညျးဆုံး ငှကေပျြ ၂၀၀ လောကျနဲ့ ဝယျနိုငျပါတယျ။၁ ခါရှုကို ၁ ပေါကျရှုလို့ ချေါပွီး အနညျးဆုံး ၂၀၀ ဖိုးနဲ့ဝယျနိုငျပွီး တခါထိုးပမာဏ ဘိနျးဖွူဆိုရငျ အနညျးဆုံး ကပျြ ၅၀၀ ဖိုးအထိ ဝယျနိုငျပါတယျ။ဘိနျးဖွူကို အကွောထဲ ထိုးသှငျးသူတှကေတော့ သုံးစှဲမယျ့ ဘိနျးဖွူပမာဏ ကို ဆေးထိုးအပျထဲ ထညျ့ပွီး ရနေဲ့ရော၊ အကွောထဲကို ထိုးသှငျးကွပါတယျ။မှျောနဲ့ မနီးမဝေး ဆိပျမူရှာထဲမှာတော့ ပွနျ့ကြဲနတေဲ့ သုံးပွီး သား ဆေးထိုးအပျတှကေို လမျးဘေးတလြှောကျ မွငျရပါတယျ။ကြေးလကျဆေးပေးခနျးနဲ့ ကြောခငျြးကပျမှာကိုပဲ ။
ဖိုးသမားတှရေဲ့ တဲလေးတှေ ဟိုတစု ဒီတစု ရှိနပေါတယျ။သိပျမကွာခငျမှာပဲ ခပျကယျြကယျြ ဆိုငျကယျ ဟှနျးသံတှပေေးပွီး ဆေးသမား တှေ အုပျစုလိုကျ ရောကျလာကွပါတယျ။ဒီနရောဟာ ညနတေိုငျး သူတို့တှေ စုဝေးရာအရပျလို့ ရှာခံတှကေ ပွောပါတယျ။ခဏကွာတော့ ဘိနျးရှုသူရှု၊ အကွောထဲ ဆေးထိုးသူထိုးနဲ့ နိဗ်ဗာနျဘုံ ယာယီရောကျဖို့အရေးထကျ ဘာကိုမှ သူတို့တှေ ဂရုမစိုကျနိုငျကွတော့ပါဘူး။မှိနျးပွီး ဇိမျခံနကွေသူတှရှေိသလို လကျတှေ ပေါငျတှမှော ဆေးထိုးအပျတနျးလနျး နဲ့ ဥဒဟို သှားလာနသေူတှလေညျး ရှိပါတယျ။အသိစိတျမဲ့ သှား လာနကွေသူတှကေို နဝေငျရီတရော မွငျရတဲ့ မွငျကှငျးက ခွောကျခွားစရာကောငျးလှပါတယျ။”
ကြောကျလာရှာတယျ၊ ပိုကျဆံလာရှာတယျ ဆိုတာ မိသားစုနဲ့ နှေးနှေးထှေးထှေး နခေငျြလို့ပေါ့ဗြာ …ဒါပမေဲ့ မပွလေညျခဲ့ဘူး..” လို့ ကိုစိနျ လငျးကလညျး သူ့ဘဝကွီးကို စိတျပကျြလကျပကျြ အားလြော့သံနဲ့ ပွောပါတယျ။ကြောကျမကျြမှျောတှနေဲ့ အနီးတဝိုကျရှာတှထေဲမှာကိုပဲ လှတျပဈထားတဲ့ ဆေးထိုးအပျတှကေို လမျးဘေးတလြှောကျ ပွနျ့ကြဲနပေါတယျ”ခုက ဖိုးသမားအဆငျ့ရောကျနပွေီဆိုတော့ ယငျးလညျး တျောတျောကွီးလာပွီ၊ ဖွတျဖို့လညျး တျောတျောခကျသှားပွီ၊ တဈရကျကို မရှိဘူးဆို အနညျးဆုံး ၂ ကွိမျ ၃ ကွိမျ တခါတလလေညျး ၅ ကွိမျ ၆ ကွိမျ ပိုကျဆံရှိရငျ ရှိသလို သုံးတယျ” လို့ ကြောကျရှာဖို့ မိုးညှငျးကနေ ဖားကနျ့ရောကျလာခဲ့တဲ့ ကိုဝငျးအောငျက ပွောပါတယျ။
ခွတှေေ လကျတှမှော ဆေးထိုးအပျရာ ဗရပှနဲ့ သူ့ကွညျ့ရတာ အတျောလေး အားနညျးနပေုံလညျး ရပါတယျ။အဝေးတနရောကို လှမျးမြှျော ကွညျ့ရငျး “ကိုယျ့ဘဝကွီးကို ဘယျလိုမှကို မပွောတတျတာ…””ကိုယျ့ကိုယျသသှေားတာပဲ ကောငျးတယျ..ကိုယျ့မိဘတှေ ကိုယျပတျဝနျး ကငျြနဲ့ ဆှမြေိုးအသိုငျးအဝိုငျးကို မပွရဲတာ… ဒီလိုဖွဈခဲ့မယျလို့ ထငျကို မထငျထားဘူး၊ ကိုယျသုံးတုနျးကတော့ အပြျောသကျသကျပဲ၊ ဒီ လောကျကွီး စုတျပွတျသကျသှားမယျလို့ မထငျထားဘူး” လို့ အဝေးတနရောကို ခပျတှတှေကွေီး လှမျးမြှျောကွညျ့ရငျး ကိုဝငျးအောငျက ပွောပါတယျ။ မှျောထဲကနေ ဖားကနျ့မွို့ကို ပွနျရောကျတော့ မိုးစုပျစုပျခြုပျ နပေါပွီ။
နခေ့ငျးဘကျမှာ ဖုနျထူပွီး ခွောကျသှလှေ့ပမေဲ့ ညဘကျမှာတော့ ပွနျလညျ သကျဝငျလှုပျရှားလာပါတယျ။မီးရောငျ ခပျမှိနျမှိနျထှနျးထားတဲ့ တညျးခိုခနျးတှေ၊ ပြျောပှဲစားရုံတှထေဲ လောငျးကစားဝိုငျးတှေ၊ လိငျအလုပျသမတှနေဲ့ ညဟာ အလုပျ မြားနပေါတယျ။မှျောတှထေဲက လော ပနျကွီးတှေ လာရောကျအပနျးဖွကွေတာဖွဈလို့ တညျးခိုခနျးတှမှော အခနျးတဈခနျးရဖို့ မလှယျလှပါဘူး။”ဖားကနျ့က ပူတယျလေ၊ ဒီတော့ ညဆို လောပနျတှကေ ဟျောတယျမှာ လာအိပျကွတာပေါ့” လို့ ဟိုတညျဝနျထမျးတဈဦးက ပွောပါတယျ။